Warar - Maxay yihiin qaybaha ku habboon makaanaynta saxda ah
Maxay yihiin qaybaha ku habboon makaanaynta saxda ah
Waan ognahay in qalabaynta saxda ahi ay leedahay shuruudo sare oo sax ah, qalabaynta saxda ahi waxay leedahay qallafsanaan wanaagsan, saxsanaanta waxsoosaarka sare, iyo dejinta qalab sax ah, sidaa darteed waxay ku shaqeyn kartaa qaybo leh shuruudaha saxda ah ee sarreeya. Marka maxay yihiin qaybaha ku habboon mashiinnada saxda ah? Kuwa soo socda waxaa soo bandhigay Xiaobian:
Ugu horreyntii, marka la barbardhigo lathes-ka caadiga ah, fiilooyinka CNC waxay leeyihiin shaqeyn goyn xawaare joogto ah, iyadoo aan loo eegin wajiga dambe ee lathe ama dhexroorka dibadda ee dhexroorro kala duwan ayaa lagu shaqeyn karaa isla xawaaraha isku midka ah, taas waa in la hubiyo qiimaha dusha sare ee dusha sare oo xoogaa yar. Lathe caadiga ah wuxuu leeyahay xawaare joogto ah, xawaaraha goynta wuxuu ku kala duwan yahay dhexroorka. Marka maaddada shaqada iyo aaladda, gunnada dhammeynta iyo xagasha qalabka ay joogto yihiin, dusha sare ee dusha sare waxay kuxirantahay xawaaraha goynta iyo xawaaraha quudinta.
Marka lagu shaqeynayo sagxadaha dusha kaladuwan ee kaladuwan, sicir yar oo cunto ah ayaa loo isticmaalaa dusha sare oo leh qallooc yar, iyo sicirka quudinta sare waxaa loo isticmaalaa dusha sare leh qallooc weyn, oo leh kala duwanaansho wanaagsan, oo ay adag tahay in lagu gaaro lathes caadi ah . Qaybaha qaabdhismeedka isku dhafan. Qalooca diyaarad kasta waxaa lagu qiyaasi karaa xariiq toosan ama qaanso wareegsan. Mashiinka saxda ah ee 'CNC machining machining' wuxuu leeyahay shaqada isku-dhex-wareegga wareega, kaas oo ka baaraandegi kara qaybaha kala duwan ee dusha sare. Isticmaalka makiinada saxda ah ee cnc waxay u baahan tahay adeegsiga taxaddarka wadaha.
Mashiinka saxda ah ee loo yaqaan 'CNC machining machining' waxaa inta badan ku jira rogid ganaax ah, caajis wanaagsan, axdi qarameed, shiidiin iyo geedi socodka wax shiida:
(1) Leexasho wanaagsan iyo caajis wanaagsan: Daawaha saxda saxda ah (aluminium ama magnesium alloy) qaybo ka mid ah diyaaradaha waxaa lagu farsameeyaa qaabkan. Qalabka halbeegga ah ee loo yaqaan 'crystal single diamond diamond' ayaa guud ahaan la isticmaalaa, iyo gacan faneedka geeska daabku wuxuu ka yar yahay 0.1 micron. Mashiinka ku shaqeeya lathe sax ah wuxuu gaari karaa 1 micron sax ahaanta iyo sinnaan la'aanta dusha sare iyadoo celcelis ahaan kala duwanaanta dhererkeedu ka yar yahay 0.2 micron, iskuduwaha isku dheelitirkuna wuxuu gaari karaa mic 2 micron.
(2) Mindhicir Fiican: waxaa loo isticmaalaa makiinadaha aluminium ama beryllium daawaha qaybo qaab dhismeedyo leh qaabab isku dhafan. Ku kalsoonow saxnaanta tilmaamaha iyo dunmiiqa mashiinka mashiinka si aad u hesho saxnaanta booska labada dhinac. Mashiinka xawaaraha sare leh oo si taxaddar leh ula socda talooyinka dheeman ee dusha sare ee muraayadaha.
(3) shiidi Fiican: waxaa loo isticmaalaa mashiinka mashiinka ama meelaha daloolka. Qaybahan badankood waxay ka samaysan yihiin bir adag oo adag. Badi mashiinnada wax lagu shiido ee mashiinnada dheellitiran waxay isticmaalaan biyo-saareeye ama cadaadis firfircoon oo saa'ido leh si loo hubiyo xasilloonida sare. Marka lagu daro saameynta qallafsanaanta mashiinka mashiinka iyo sariirta, saxnaanta kama dambaysta ah ee shiidi waxay sidoo kale la xiriirtaa xulashada iyo dheelitirka shaagagga wax lagu shiido iyo saxnaanta mashiinka ee daloolka dhexe ee qalabka shaqada. Mashiinka shiidan wuxuu gaari karaa saxsanaanta cabir ahaan 1 micron iyo wareegga ka-baxsan ee 0.5 micron.
(4) Mashiinka: Xulida iyo ka shaqeynta qeybaha aan caadiga aheyn ee korka kor loogu qaadayo iyadoo la adeegsanayo mabaadii'da cilmi baarista labada dhinac ee iswaafajinta. Dhexroor walxaha abrasive, goynta xoogga iyo goynta kuleylka si sax ah loo xakameyn karaa, sidaa darteed waa habka ugu saxsan ee ka shaqeynta farsamada saxda ah ee qalabka farsamada. Qaybaha haydaroolka ama pneumatic mating ee qaybaha saxda saxda ah ee diyaaradda iyo qaybaha dhalista ee matoorka dhaqdhaqaaqa cadaadiska firfircoon ayaa dhammaantood looga baaraandegaa habkan si loo gaaro saxsanaanta 0.1 ama 0.01 micron iyo isku dheelitirnaan la'aanta micro ee 0.005.